He’s Just Not That Into You (2009) – Channel Myanmar
PG-13 2009 129 min Comedy, Drama, Romance
IMDB: 6.4/10 146,532 votes
ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ ၂၀၀၉ တုန်းက ထွက်ထားတဲ့ အချစ်ဒရမ်မာဇာတ်မြူးလေးပါ။ ဒီကားမှာ လူငယ် ၉ ယောက်ရဲ့ အချစ်ရေးပြသနာတွေကို ပုံဖော်ထားတာကြောင့် မင်းသား မင်းသမီးတွေ စုံစုံလင်လင် တွေ့ရမှာပါ (ဆာဘတ်တောင် ပါသေးတယ် ?)။
Ben Affleck, Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Jennifer Goodwin, Drew Barrymore,
Scarlett Johanssဝn နဲ့ Justin Long တို့လို့ နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တွေ ပါဝင်ထားတာမို့ လက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ဇာတ်ကားပါ။
လက်တွေ့ဘဝမှာ လူငယ်တွေကြားဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အချစ်ရေးပြသနာတွေကို ရိုက်ကူးထားတာမို့ relationship နဲ့ မကင်းနိုင်သူတိုင်း ကြည့်သင့်ပါတယ်။ မိန်းကလေးအတွေးနဲ့ ယောကျာ်းလေးဘက်က အတွေး မတူတာလေးတွေ၊ ဆောရန် ရှောင်ရန် လေးတွေပေါ့ ??
? အချစ်စစ်ကိုလိုချင်ပေမဲ့ လူမှန်မတွေ့နိုင်ဘဲ အမြဲလွဲနေတဲ့ ကောင်မလေး၊ အဲဒီကောင်မလေးကို အကြံတွေ ပေးတတ်တဲ့၊ စော်တွေထည်လဲတွဲတတ်တဲ့ ဘားဆိုင်ပိုင်ရှင် လူငယ်တစ်ယောက်။
? ခုနစ်နှစ်လောက်တွဲနေပြီး တကယ်လည်း ချစ်ပေမဲ့ လက်ထပ်ခြင်းကို မယုံကြည့်တဲ့လူငယ်နဲ့ တခြားမိန်ကလေးတွေနည်းတူ ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်ပွဲဆင်နွှချင်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်။
? မိမိကို အသည်းအသန်ကြွေနေတဲ့သူ ရှိပါရက်နဲ့
အိမ်ထောင်သည်ကိုမှ ကြိုက်မိတဲ့ အလန်းစားကောင်မလေး။
? မိမိအပေါ် လိုသုံးလိုသဘောထားမှန်းသိရက်နဲ့
အဲဒီမိန်းကလေးကိုမှ တန်းတန်းစွဲချစ်နေတဲ့ လူငယ်။
? ရည်းစားရဖို့အရေး အွန်လိုင်းမှာ အကောင့်ပေါင်းစုံနဲ့ ကြူ ပြီး အမြဲအညာမိနေတဲ့ ကောင်မလေး။
သူတို့.. သူတို့တွေ ဘယ်လိုတွေရှေ့ဆက် ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားစရာ ကြည့်ကြရမှာပါ။
(ရုပ်ရှင်အညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်တင်ဆက်ထားသူကတော့ Cherry Mon ဖြစ်ပါတယ်။)
File size…(1.6 GB) and(1.2 GB) and (520 MB)
Quality…Blu-Ray Rip 720p DTS 5.1 CH
Translated by Cherry Mon
Option 1 yoteshinportal.cc 1.6 GB
Option2megaup.net 1.2 GB
Option3upstream.to 1.6 GB
Option4usersdrive.com 1.2 GB
Wild Wild West (1999) 1999
3D Sex And Zen: Extreme Ecstasy (2011)18+ 2011
American Pie 4: Band Camp (2005) 2005
School of Rock(2003) 2003
Three Colours: White (1994) 1994
The Bedside Detective (2007) 2007
Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events (2004) 2004